Agreement on the Reciprocal Establishment of Cultural Centers between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the People’s Republic of China signed – Ministry of Foreign Affairs
Agreement on the Reciprocal Establishment of Cultural Centers between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the People’s Republic of China signed
An agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the People’s Republic of China on the Reciprocal Establishment of Cultural Centers was signed by H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of Myanmar and H.E. Mr. Luo shu Gang, Minister of Culture of China on 4th September 2015 during the visit of U Thein Sein, President of the Republic of the Union of Myanmar, to China to attend the 70th Anniversary of the Victory of the World Anti-Fascist War held in Beijing, the People’s Republic of China.
Dated:6September 2015
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်မှု အောင်မြင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ယဉ်ကျေးမှု စင်တာ အပြန်အလှန်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်တစ်ရပ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ လော်ရှူးကမ်းတို့မှ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်